अल्लारे प्रचण्ड ! एकैछिनमा लभ, एकैछिनमा ट्रयाजेडी - Awajonline Online Newspaper
अल्लारे प्रचण्ड ! एकैछिनमा लभ, एकैछिनमा ट्रयाजेडी
उमेरले पाको देखिएपनि, नेपाली राजनीतिमा केही भोटा फटाएपनि एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” अल्लारे युवा भन्दा फरक होइनन् । उमेरले ६० कटेका नेता हुन् उनी । मेहन्दी नलगाउँने हो भने उनको कपाल र दाह्री पूरै फुलेको देख्न सकिन्छ । छोराछोरी, नाती–नातिना नै केटाकेटी उमेरका छैनन् उनका । केही छोडेर उमेरले सबै पाका छन् । तर, प्रचण्ड स्वयं चाहिँ केटाकेटी जस्तै छन् । उनका अल्लारे, आलाकाँचा र उरुन्ठेउला निर्णयका कारण उनलाई भन्न मन लाग्छ–अल्लारे “प्रचण्ड” ।
त्यसो त उनी अल्लारे, केटाकेटी जस्ता नभएका भए वर्षौ वर्षको राजनीतिक प्रेम सम्बन्ध भएका बाबुरामले उनीसँग डिभोर्स गरिहाल्ने पनि थिएनन् होला । प्रचण्डमा बेलाबेलामा देखिने अल्लारेपनकै कारण बाबुराम आजित भएर बाहिरिएका हुन् । यसमा धेरै शंका गरिरहन नपर्ला ।
प्रसंग–पछिल्लोपटक प्रचण्डमा देखिएको अल्लारेपनको हो । हुनत यसलाई केटाकेटीपन भन्न पनि मिल्ला । आफ्नै प्रस्तावमा बनेको ओली सरकारसँग पछिल्लोपटक सम्बन्ध ब्रेक अप गर्न उनी रातारात तयार भए । अनि फेरि ओली सरकारलाई नै आई लभ यु टु मच भन्न पनि रातारात नै भ्याए । आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउँने भन्दै अघिल्लो दिन प्रेस विज्ञप्तीमा सही धस्काए । अनि फेरि त्यो सहीको मसी सुक्न नपाउँदै अर्को एउटा संयुक्त प्रेमपत्र जारी गरे ।
अघिल्लो दिन ओलीसँग डिभोर्स गर्ने विज्ञप्ती निकाल्नु अनि त्यसैको भोलिपल्ट फेरि लभ परेको घोषणा गर्नु । यो कस्तो अनौठो ? एकैछिनमा एउटा सनक फेरि एकैछिनमा अर्को । एकैछिनमा डिप् लभ । एकैछिनमा ट्रयाजेडी । एकैछिनमा आई लभ यू डार्लिङ अनि एकैछिनमा ……….। यो सबै प्रचण्डको अल्लारेपन हो । टिन एजर्सहरुमा देखिने लभ र ट्रयाजेडी जस्तै हो ।
पाको मान्छेले पाकै निर्णय गर्छ । केही गर्नु भन्दा अघि कम्तीमा दश पटक सोच्छ । र, निर्णय गरेपछि ऊ त्यसमा टसको मस हुँदैन । तर, प्रचण्ड उमेरले पाको मान्छे भएर पनि राजनीतिमा आलाकाँचा निर्णय गर्छन् । कटुवाल प्रकरणमा होस् या पशुपति मन्दिरमा भट्ट नियुक्ति । उनका अति नै आलाकाँचा र उरुन्ठेउला निर्णयहरु हुन् । जसलाई प्रचण्ड स्वयंले पनि स्विकार गरेका छन् ।
उहिले उनले के के गरे त्यो कुरा छोडौं । र, अहिलेकै कुरा गरौं । छँदा खाँदाको ओली सरकारसँग सम्बन्ध ब्रेक अप गर्न उनलाई के ले बाध्य पारेको थियो ? कांग्रेसले उचाल्ने बित्तिकै उचालिने अनि एमालेले थचार्ने बित्तिकै थचारिने कस्ता नेता हुन् उनी ? कांग्रेसले ल अब तपाईँ प्रधानमन्त्री भन्ने बित्तिकै दायाँ बायाँ नहेरी विज्ञप्ती निकालिहाल्ने अनि एमालेले कानेखुशी गर्ने बित्तिकै हिजो जोशमा होस् पु¥याइएन भनेर त्वम् शरणम् गर्ने । कस्ता पात्र हुन् उनी ?
जसले जे भन्यो त्यसैका पछि लाग्ने । कस्तो बानी हो उनको ? अनि छिनभर पनि आफ्नो निर्णयमा अडिग रहन नसक्ने कस्तो शैली हो उनको ? हुन त उनको अल्लारेपन अहिले मात्र देखिएको होइन । पहिले पनि उनी काठमाडौंमा एउटा कुरो बोल्थे अनि ललितपुर पुगेपछि बिर्सन्थे र अर्कै बोल्थे । दिनमा दश ठाउँ दश वटा कुरा फेर्थे । त्यसैले त हो, उनका अहिलेका पार्टनर केपी ओली उनीप्रति तुक्काको वर्षा गर्थे ।
पाको उमेरको नेता भएका कारण पनि उनी नेपाली मन मष्तिस्कमा पाको, भरपर्दो र विश्वासिलो नेताका रुपमा स्थापित हुनुपर्ने हो । तर, उनी अझै आलाकाँचा र उरुण्ठेउला नेताका रुपमा चिनिन्छन् । एउटा सामान्य मान्छे त बोलीको पक्का हुनुपर्छ भने उनी त देशका ठूला नेता । के उनको बोलीमा विश्वास गर्ने ठाउँ हुनुपर्दैन ? उनले केही बोल्नु र गर्नुभन्दा अघि केही समय सोच्नुपर्दैन ? लहडका भरमा, अरुले उचालेका भरमा उनी उचालिँदा र थचारिँदा उनलाई मात्र असर पर्दैन सिंगो देशलाई असर पर्छ । किनकि उनी त देशका ठूला पार्टीमध्येको एक पार्टीका अध्यक्ष हुन् ।
तर, यसको अर्थ ओली सरकार ढालेर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउँने जुन योजनाका साथ प्रचण्ड अघि बढेका थिए त्यो हुनुपथ्र्यो र उनले त्यसै गर्नुपथ्र्यो भन्ने होइन । अहिलेको सरकार कति ठिक कति बेठिक ? त्यो समिक्षाको एउटा पाटो हो । जसका विषयमा अनेकौं टिका टिप्पणी र बहसहरु भइरहेकै छन् । तर, सवाल यति हो प्रचण्ड जस्तो मान्छेको आफ्नो अडान हुनुपर्छ । आफ्नो विचार हुनुपर्छ । अरुले जता भन्यो त्यतै हिँड्ने र जे भन्यो त्यही गर्ने होइन । लभ ओलीसँग गर्ने कि देउवासँग । त्यो उनैले निर्णय गर्ने कुरा हो । तर, छिनमै ओलीसँग डिप् लभमा पर्ने अनि छिनमै देउवासँग । अनि छिनमै लभहरु ट्रयाजेडीमा रुपान्तरण हुने । यो चाहिँ अल्लारे लभ हो । जुन अशोभनिय मात्र छैन घातक पनि छ ।